Miatrika ny trangana COVID-19 voalohany tamin’ny alàlan’ny fanakatonana vonjimaika ny sisintaniny i Bhutan · Global Voices teny Malagasy
Nametra ny fidiran'ny mpizahatany rehetra mandritra ny tapa-bolana ny governemanta
Voadika ny 24 Marsa 2020 4:14 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, Ελληνικά, Français, English
Sary avy amin'ny iXimus tao amin'ny Pixabay.
Tamin'ny 6 Martsa 2020, nisy ny fanambarana an-gazety avy amin'ny biraon'ny Praiminisitra tao Bhutan fa voamarina ny fisian'ny trangana COVID-19 iray tao Bhutan ny alin'iny tamin'ny 11 ora alina. Avy hatrany ny governemanta dia nandràra mandritra ny 14 andro ny fidiran'ny mpizaha tany iraisam-pirenena rehetra .
Vaovao farany momba ny COVID-19: Nametra ny sidina ho an'ireo mpizahatany rehetra mandritra ny roa herinandro hoavy i Drukair ary manan-kery avy hatrany izany. Nanambara ny zotram-piaramanidina fa hanohy ny famerenam-bola feno ry zareo aorian'ny COVID-19.
- Nandrara ny fidiran'ny mpizaha tany rehetra mandritra ny roa herinandro i Bhutan “miaraka amin'ny fampiharana izany avy hatrany” taorian'ny fahitana ny trangana coronavirus voalohany.
– Nahemotra afaka 2 herinandro ny fihaonambe iraisam-pirenena sy ny seminera rehetra.
– Nakatona mandritra ny 2 herinandro ny sekoly sy ny ivontoeram-pampianarana any Thimpu, Paro ary Punakha.
Ny tranga COVID-19 voalohany
Araka ny fanambarana an-gazety iray navoaka tao amin'ny pejy Facebook-n'ny biraon'ny Praiminisitra:
76 taona ny marary iray ary avy any Etazonia izay mpizaha tany tonga tao Bhutan. Tao amin'ny seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena tany Paro izy no tonga rehefa niondrana tami'ny sidina Drukair KB241 avy ao Guwahati, India tamin'ny 2 Martsa.
Nodinihina ny filazalazana momba ny fahasalaman'ilay marary tao amin'ny seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Paro. Nanondro “miiba” amin'ny fisehon'ny soritr'aretina rehetra taminy izy ary tsy nahitana marika fanaviana ihany koa.
Tamin'ny 2 Martsa, nankany amin'ny toeram-pitsaboana foibe ao amin'ny hopitaly National Referral Hospital (JDWNRH) ilay marary, ny hopitalibe ao Bhutan rehefa tonga tany Thimphu. Nitaraina fa nisalebolebo sy nandoa izy. Tsy tratry ny gripa anefa izy ka nalefa nody niaraka tamin'ny fanafody. Nandeha tany Punakha ilay marary, tanànakely Himalayan, tokony ho 85 km avy ao Thimphu ary nijanona tao amin'ny trano fandraisam-bahiny mihaja iray.
Nankany amin'ny National Referral Hospital indray izy rehefa niverina avy any Thimphu ny 5 Martsa niaraka tamin'ny soritr'aretina gripa ary nozahana. Nanaovana fitilina izy ary nalefa tany amin'ny Royal Center for Disease Control (RCDC) (Foibe Fanaraha-maso ny Soritr'aretina ) ary voamarina fa tratran'ny aretina coronavirus. Natoka-monina ihany koa ireo olona niaraka tamin'ity marary ity, ny mpamily, ny mpitari-dalana, ary ireo mpandeha Indiana miisa valo izay niaraka taminy.
Nilaza ihany koa ny fanambarana an-gazety fa manaraka ny drafi-panomanana sy ny fandraisana an-tànana nasionaly i Bhutan ary ny Mpanjaka Jigme Khesar Namgyel Wangchuk mihitsy no miandraikitra manokana ny fandraisana an-tanana sy ny fampiharana ny paikady. Voalaza fa efa niomana tanteraka hiatrika ny areti-mifindra ny governemanta taloha kelin'izay.
Maherin'ny 90 ireo olona nifandray tamin'ity marary ity hatreto ary efa hitan'ireo tompon'andraikitra ara-pahasalamana.
Ny 6 Martsa, nanambara ny governemanta fa mikatona ireo sekoly sy andrim-panjakana any amin'ny distrikan'i Thimphu, Paro ary Punakha mandritra ny roa herinandro. Nahemotra amin'ny 14 andro manaraka ihany koa ireo fihaonambe iraisam-pirenena sy seminera nokasaina hatao ao amin'ny firenena .
Nampitandrina i Tshering Zang Mo, mpaneho hevitra ao amin'ny Facebook-n'ny biraon'ny Praiminisitra fa mety tsy manana ny fotodrafitrasa ilaina i Bhutan hiatrehana ny fihanaky ny COVID-19:
Tsy nahomby ny seranam-piaramanidina, tsy nahomby ny governemanta ary hiatrika ny vokatr'izany ny vahoaka ankehitriny. Tsy manana fitaovana ara-pitsaboana manara-penitra toa ny any amin'ny firenen-kafa i Bhutan, namoizana ain'olona maro ireo firenen-kafa na dia eo aza ny fitaovana ara-pitsaboana manara-penitra.
Nilaza ny mpaneho hevitra iray hafa Vick Cash Rai hoe:
Ny fanontaniana mipetraka izao dia ny hoe, efa firy ireo olona tratran'ny aretina ???? Efa nilaza ny governemanta fa efa vonona tsara izy ireo, ndao ho jerena ny fahavononan'izy ireo. Hiatrika ny vokatr'izany ny olona mahantra eto Bhutan noho ny tsy firaharahian'ny governemanta.
Naneho hevitra i Sangay Thinley:
Antenaina fa voafehy tsara ny fihibohana sy ny fanokana-monina… Mitandreama tsara ianareo dokotera sy ny mpiasan'ny fahasalamana rehefa mitsabo azy ireo… Midera ireo mpiasan'ny fahasalamana rehetra miatrika ny zava-mitranga aho amin'izao fotoana izao .. Mitandrema hatrany.
Naneho hevitra i Yan Seen Gazmer:
Ankehitriny, hilatsaka ny GNH (Harim-piadanana Faob) eto amin'ny firenentsika. Navoakantsika ny hafatra fa tsy tokony ho antony hahafaty ny olona iray na ny vahiny na ny olom-pirenena Bhotaney. Ankehitriny, efa tonga ny fotoana. Nanoratra isika mponin'i Bhutan fa tsy tokony havela hiditra ny olona any ivelany mandritra ny volana vitsivitsy mandrapaha-foanan'ny tranga coronavirus.
Manomboka izao, mila miatrika izany isika na inona na inona fitrangany.
Na izany aza, nanontany ny governemanta ireo solontena avy amin'ny sehatra tsy miankina amin'ny fomba ahafahan'izy ireo manome fanampiana ary nanolotra sakafo sy fitaovana nandritra ny fotoana nanaovana ny fihibohana.
Nangataka ny vahoaka Bhotaney mba ho tony ilay mpanao gazety Namgay Zam:
Ny fitoniana no tsara indrindra amin izao fotoana izao. Miangavy anareo mba tsy hanangona ny fanadiovan-tanana sy ny saron-tava. Mbola mila izany kokoa ireo dokotera mpitsabo sy ireo marary antsika!🙏🏼
Ary sasao matetika ny tananao.
Zahao ny fitantarana manokana ato amin'ny Global Voices momba ny fiantraikan'ny coronavirus tany Wuhan.